တီအာဝိုင် : ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေပါ...တဲ့
ဆရာတစ်ယောက် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကို အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ မှတ်သားစ ရာသင်္ခန်းစာလေးတွေပါတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်စီ မိဘတွေကိုပြောခိုင်းပြီး မှတ်သားခဲ့ဖို့ မှာ လိုက်တယ်။ပြီးတော့ နောက်နေ့ မှာ အဲ့ဒိပုံပြင်တွေကို ပြန်ပြောပြရမယ်လို့ လဲ ပြောလိုက်တယ်။
နောက်နေ့ ကျောင်းချိန်မှာ ဂျိုးက စပြောတယ်။ “ သားရဲ့ဖေဖေက လယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သားတို့ မှာ ကြက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ တစ်နေ့ မှာ သားတို့ က ကြက်ဥတွေအများကြီးကို ခြင်းတစ် လုံးထဲမှာစုထည့်တယ်။ပြီးတော့ အဲ့ဒိကြက်ဥခြင်းကြီးကို ကားခေါင်းအရှေ့ ခန်းထဲမှာ ထားပြီး ဈေးမှာ သွား ရောင်းဖို့ ထွက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ လမ်းမှာ ကားက အရမ်းနဲ့ ဆောင့်တော့ ကြက်ဥတွေ အကုန်ကွဲကုန်တယ်။
ဒီပုံပြင်ရဲ့ သင်္ခန်းစာကတော့ ဥတွေအားလုံးကို ခြင်းတစ်လုံးထဲမှာ ဘယ်တော့မှ စုမထည့်ထားပါနဲ့ ၊ဒါက တိုက် ရိုက် သင်္ခန်းစာ၊သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် မိမိရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ဘယ်တော့မှာ မထားပါနဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ..”လို့ ပြောတယ်။
ဆရာက အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ ချီမ်းမွမ်းစကားပြောပြီး ကဲ နောက်တစ်ယောက်…မေရီ ပြောပါဦး လို့ ပြော လိုက်တယ်။
မေရီက သမီးတို့ လဲ လယ်သမားတွေပါပဲ၊သမီးတို့ အိမ်က ကြက်မကြီးတွေကအကောင်ပေါက်နှစ်ဆယ်
လောက်ပေါက်ဖို့ ဝတ်ကျင်းထဲမှာ ဝတ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်း ပေါက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဆယ်ကောင်ပဲ ပေါက်ပါတယ်။
ဒီပုံပြင်ရဲ့ မှတ်သားစရာသင်္ခန်းစာကတော့ ကြက်ဥတွေကို သူတို့ မပေါက်ခင် ဘယ်နှစ်ကောင်လဲ ဆိုတာမရေ တွက်ပါနဲ့ တဲ့။တိုက်ရိုက်အားဖြင့်တော့ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ အမြဲတန်း ပုံသေတွက်လို့ မရဘူးဘူး လို့ ဆို လိုတာပါ။
ဆရာက ကောင်းပါတယ်..မှတ်သားစရာလေးလဲ ပါတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီး..ကဲ အခု ဘန်နီရဲ့ အလှည့်….ပြောပါဦးသားရဲ့ ပုံပြင်ကို ဟု ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ ဘန်နီက သားရဲ့ဒေါ်ဒေါ်ကာရံရဲ့ အကြောင်းလေး ကို သားဖေဖေက ပြောပြတာပါ။ ဒေါ်ဒေါ်က လေတပ်အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်။ သူ့ ရဲ့ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ လေယာဉ်ကို အောက်က လက်နက်နဲ့ အပြစ်ခံရတယ်။ပြီးတော့ ရန်သူ့ လက်အောက်ရောက်လုဆဲဆဲဖြစ် နေ ပြီး။အဲ့ဒိ အချိန် သူ့ လက်ထဲမှာ ဝီစကီတစ်လုံးရယ် ၊စက်သေနပ်တစ်လက်ရယ်၊တောခုတ်ဓါးတစ်ချောင်းရယ်ပဲ ရှိတော့တယ် လို့ ပြောပြီး ဆက်မပြောပဲ အတန်ငယ်ရပ်တန့် သွားတယ်။ဆရာကအရမ်းစိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ မြန်မြန်ဆက်ပြောဖို့ 
တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ဘန်နီက ဆက်ပြောတယ်။ ဒေါ်ဒေါ်က ဝီစကီကိုသောက်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်ကနေခုန်ချတယ်။ လေထဲမှာပဲ ပြင်ဆင်စရာရှိတာကို ပြင်ဆင်တယ်။
ပြီးတော့ ဘေးပတ်ပတ်လည် ရန်သူအယောက်တစ်ရာလောက် ရှိတဲ့ ကြားထဲကို ရောက်သွားတယ်။ သူ့ မှာ ရှိသမျှကျည်ဆံ တွေနဲ့ အကုန်လှည့်ပတ် ပြစ်လိုက်တာ ရန်သူ အယောက်ခုနစ်ဆယ်လောက် ကျသွားတယ်။ သူ့ ရဲ့ တောခုတ်ဓါး မတုန်းမချင်း လိုက်ခုတ်ပြစ်တာ ရန်သူ အယောက် နှစ်ဆယ်ကျသွားတယ်။ ကျန်ဆယ်ရောက်ကိုတော့ လက်ရုံးရည်ချင်း ယှဉ်ပြီး ထိုးသက်ပြစ်လိုက် တယ်။
ပုံပြင်က သဲထိတ်ရင်ဖိုနဲ့ အရမ်းကောင်းတာပဲ..ဒါနဲ့ မှတ်သားစရာ သင်္ခန်းစာလေးကို ပြောပါဦးသားရယ် လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ ဘန်နီက ပြန်ဖြေတယ်။
သားရဲ့ဒေါ်ဒေါ် ကာရံအရက်သောက်ပြီးသွားရင် သူနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေပါ….တဲ့။
Posted by kathavarta on September 26, 2008
In the classroom the next day, Joe gave his example First, “My dad isafarmer and we have chickens. One Day we were taking lots of eggs to market inabasket On the front seat of the truck when we hitabig bump In the road; the basket fell off the seat and all the Eggs broke.”
“The moral of the story is not to put all Your eggs in one basket..”
Next, Mary said, “We are farmers too. We had twenty Eggs waiting to hatch, but when they did we only got Ten chicks.”
“The moral of this story is not to count Your chickens before they are hatched”
“Aunt Karen drank the whiskey on the way down to Prepare herself; then she landed right in the middle Ofahundred enemy soldiers. She killed seventy of Them with the machine gun until she ran out of Bullets. Then she killed twenty more with the machete Till the blade broke. And then she killed the last ten With her bare hands.”
The child said “Stay away from Aunt Karen when she’s been Drinking”
Posted by Nan Shin at 6:35 PM